जब शाहरुखले आमिरलाई किन काजोलसँग काम नगर्नू भने ? – " कञ्चनजंगा News "
जब शाहरुखले आमिरलाई किन काजोलसँग काम नगर्नू भने ?
No Comments on जब शाहरुखले आमिरलाई किन काजोलसँग काम नगर्नू भने ?
काठमाडौं । बलिउड स्टार शाहरुख खानको जन्मदिन । आजदेखि शाहरुख ५६औँ वर्षमा प्रवेश गरेका छन् ।बलिउडमा शाहरुखलाई ‘रोमान्स किङ’ को ट्याग दिइएको छ । किनकि उनले अभिनय गरेका अधिकांश फिल्म रोमान्टिक ड्रामाका छन् । शाहरुखको जोडीका रूपमा दर्शकले काजोललाई मन पराएका छन् । शाहरुख र काजोलको जोडी अभिनित अधिकांश फिल्मलाई दर्शकले रुचाएका छन् । काजोलसँग उनले पहिलो फिल्म ‘बाजीगर’ मा काम गरेका थिए भने पछिल्लो फिल्म थियाे ‘दिलवाले’ ।
काजोलको बढी बोल्ने र टिप्पणी गर्ने बानी शाहरुखलाई मन परेको थिएन । काजोललाइ पनि केही कुरामा शाहरुख ठिक लागेको थिएन । यसैले गर्दा छायांकनको क्रममा यी दुईको झ–ग—डा पनि भयो । यसलाई शाहरुख स्वयंले एक अन्तर्वार्ताको क्रममा बताएका छन् । यद्यपि जसरी छायांकनमा यी दुईको भेटघाट हुँदै गयो, एक अर्कालाई बुझ्दै गए । र, पछि यी दुई राम्रो साथी बने ।
← डान्सर सुशान्तलाई प्रहरीले के गरेको थियो ? चर्चित विषयको वास्तविकता यस्तो छ → दीपक मनाङेको सम्पत्ती विवरण : २० वटा भैंसी र ५ वटा गाई भएको फार्म, अनि ६ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण